व्यायाम गर्नुहोस् जिममा गर्न जुन वास्तवमै पूर्ण छन् बेजिया
जिममा गर्न व्यायाम जुन धेरै पूर्ण हुन्छ
सुसाना Godoy | 06/04/2021 16:00 | व्यायाम
यदि तपाईंलाई अझै जिम कहाँबाट सुरु गर्ने भनेर थाहा छैन भने हामी तपाईंलाई यसका साथ मद्दत गर्दछौं। किनकि यो सत्य हो कि कहिलेकाँही हामी श्रृंखलाहरू सुरू गर्दछौं, केवल केही खास मांसपेशी समूहलाई प्रशिक्षण दिने र राम्रो कुरा के हो भने हामी आफैंलाई धेरै समर्पण गर्दछौं, वा तिनीहरूलाई दिन वा प्रशिक्षणमा वैकल्पिक रूपमा, तपाईं चाहानुहुन्छ। के तपाई जान्न चाहानुहुन्छ? व्यायाम जिम मा गर्न को लागी?
निश्चित रूपले ती मध्ये धेरै जसो तपाईलाई पहिल्यै थाहा छ, तर हामी तपाईलाई बताउँछौं कि कुन चाहिँ तपाईका लागि सब भन्दा पूर्ण हुन सक्छ। यसैले, तपाइँ तपाइँको प्रशिक्षण पूर्ण रूपमा नविकरण वा नविकरण गर्न सक्षम हुनुहुनेछ, यो जानेर केही व्यायामको साथ तपाईं सम्पूर्ण शरीर व्यायाम गर्नुहुनेछ। के यो एक महान विचार हो? ठीक छ, त्यस पछिल्लो कुरालाई नहेर्नुहोस्।
1 सैन्य प्रेस, काँधहरु को लागी एक आधारभूत व्यायाम
2 पछाडि लागि पुल अप
3 जिममा गर्न व्यायाम बीच बेंच थिच्नुहोस्
4 तपाईं डेडलिफ्टको साथ आफ्नो फिर्ता र खुट्टा व्यायाम
5 बारबेल स्क्वाट्स
सैन्य प्रेस, काँधहरु को लागी एक आधारभूत व्यायाम
सायद घरमा तपाईसँग तौल वा बारहरू छैनन्, त्यसैले व्यायाम जिममा गर्नुपर्ने एउटा यो हो। त्यसको बारेमा सैन्य प्रेस जसले हामीलाई काँधमा व्यायाम बनाउँदछ। यद्यपि पछाडि निश्चित तरीकाले पनि सामेल हुनेछ। यो गर्नका लागि, हामी प्रत्येक हातमा केही तौल वा डम्बलहरू लिन सक्दछौं, यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने तपाईं आफैले बारको साथ मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ र प्रत्येक अन्तमा डिस्क राख्नुहुनेछ। यसले तपाइँको वजनलाई उठाउनको लागि अनुमति दिन्छ जुन तपाइँको आवश्यकता अनुसार मिल्दछ। व्यायामले कुहिनोलाई बाnt्गो राख्नु, हातहरू छातीको स्तरमा राख्नु, टाउको माथि हातहरू माथि उठाउन सार्नु, तिनीहरूलाई तान्न पुग्नु समावेश गर्दछ। यो एक माथिल्लो पुश हो जुन हामी धेरै पुनरावृत्तिहरूमा प्राप्त गर्नेछौं।
पछाडि लागि पुल अप
यो पनि हुन सक्छ कि तपाईंसँग तपाईंको घरको भित्तामा उनीहरूको लागि उपकरण रहेको छ, यद्यपि जिममा हामी तपाईंलाई यसो गर्नेछौं कि तपाईं गर्नुहुनेछ। यद्यपि यो फिर्ता काम गर्न सक्षम हुन को लागी एक सबसे अनुरोध गरिएको छa, सँग धेरै अवरोधकहरू छन्। किनकि ती प्राप्त गर्न सँधै सजिलो हुँदैन। तिनीहरू बाहिर निस्केको क्षणबाट, त्यसपछि तपाईले देख्नुहुनेछ कि अर्को अझै पनी एक भन्दा बढी राम्रो हो र प्रेरणा भन्दा धेरै। यो पूर्ण व्यायाम हो किनभने हतियार र कोर पनि यसमा सामेल हुनेछ।
जिममा गर्न व्यायाम बीच बेंच थिच्नुहोस्
हो, यो एक प्रसिद्ध र सबै भन्दा पूर्ण हो। यस अवस्थामा देखि हामी पेक्टोरल साथसाथै व्यायाम गर्दै छौं। यो गर्नका लागि, हामी बेन्चमा हाम्रो पछाडि ढल्नु पर्छ। त्यसोभए, तपाईंको खुट्टा भुइँमा राम्रोसँग राख्नुहोस्, तपाईंको ग्लुट्सलाई सम्झौता गर्नुहोस् र तपाईंको स्कापुला स्थिति दिनुहोस्। बार र वजन लिन हामी स्टर्नमको उचाईमा जान्छौं वा अलि अलि कम। जब हामी यसमा पुग्दछौं, हामी कम बढावाको साथ फर्कनेछौं, तर हो, गिरावट सुस्त हुनेछ। श्वास र एकाग्रता हामीसँग सँधै साथमा हुनुपर्दछ ताकि सन्तुलन गुमाउन नपरोस।
तपाईं डेडलिफ्टको साथ आफ्नो फिर्ता र खुट्टा व्यायाम
हो, ऊ ग्रेटहरू मध्येका एक हो जसले यो व्यायाम परेड पनि मिस गर्न चाहेनन्। दुबै पछाडि, हिप वा काठ र साथ साथै खुट्टाले डेडलिफ्टको व्यायाम भोग्नेछ। तपाइँ यो स्वतन्त्र छनौटको अनुसार दुब्बर र बारको साथ दुबै गर्न सक्नुहुन्छ। जब हामीले हातहतियारको साथ वजनलाई घटाउँछौं, खुट्टाहरू फ्लेक्स गरिनुपर्दछ, जबकि पछाडि सीधा राखिन्छ र शरीर अलि अगाडि झुकाइन्छ। तर सम्झना गर्दै कि तपाईंले आफ्नो छाती बाहिर धकेल्नु पर्छ, ताकि बारलाई धेरै अगाडि धकेल्नुहुन्न। हाम्रो फिर्ता बिग्रन सक्ने आन्दोलनहरू गर्नबाट जोगिन हामी यसलाई सकेसम्म शरीरको नजिक जाँदै छौं।
यस अवस्थामा, खुट्टाको साथसाथै, हामी क्वाड्रिसिप्स र पक्कै पनि काठको भागमा काम गरिरहेका छौं। त्यसोभए यो हाम्रो जीवनमा र व्यायाम गर्ने जिममा गर्नुपर्ने ग्रेटहरूको अर्को हो। यो अर्को स्पष्ट उदाहरण हो जुन हामीले आफ्नो पिठो सीधा राख्नु पर्छ, जबकि खुट्टा र घुँडा धेरै खुल्दैन। तपाईंले त्यसलाई त्याग्नुपर्नेछ जब तपाईं तल जानुहुँदा तपाईं आफ्नो घुँडा सँगै ल्याउने वा धेरै बढ्ने गल्ती गर्नुहुन्छ। तसर्थ, हामीले बढी वा कम अभ्यास गरेको रूपमा हामीले वजन समायोजन गर्न आवश्यक छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » स्वास्थ्य » व्यायाम » जिममा गर्न व्यायाम जुन धेरै पूर्ण हुन्छ
Things चीजहरू तपाईले प्रत्येक दिन गर्नुपर्दछ स्वस्थ हुन
नेटिफ्लिक्समा 'जिन्नी र जर्जिया' श्रृंखलाको सफलताको कारण